Etu ị ga - esi melite arụmọrụ ndị otu gị | Martech Zone
Otutu ndi enyi m bu ndi ahia. N'ikwu eziokwu, anaghị m akwanyere ọrụ ha ùgwù ruo mgbe m malitere azụmaahịa m ma maa ya ahụhụ. Enwere m nnukwu ndị na-ege ntị, mmekọrịta siri ike na ụlọ ọrụ ndị na-asọpụrụ m, na nnukwu ọrụ ha chọrọ. Onweghị nke ahụ metụtara nke abụọ m si n'ọnụ ụzọ gafere ka m nọdụ na nzukọ ahịa!
Emeghị m ihe ọ bụla iji dozie onwe m ma n'oge na-adịghị anya achọtara onwe m na nsogbu. Amalitere m ọzụzụ na onye nchịkwa nke mere ka m nọrọ n'okpuru nku ya, mara m na ihe m dị mma na ya, wee nyeere m aka ịmepụta usoro omenala dị m mma mgbe ị na-achụ ahịa ahịa na atụmanya. Ọ gbanwere azụmahịa m, ugbu a, m na-ele ndị na-ere ahịa gbara m gburugburu na-atụ egwu etu ha si achụ ego mmechi.
Otu ụbọchị, enwere m olileanya ịgbazite ndị na-ere ahịa. Ọ bụghị na achọghị m ugbu a - mana amaara m na ọ dị m mkpa ịnweta onye ziri ezi n'ọnụ ụzọ nke ga-enyere anyị aka iru ikike anyị. M na-ele ọtụtụ ụlọ ọrụ iku, ntụgharị, na-egweri site na ndị ọrụ ahịa na-enweghị uche na enweghị m ike ịga n'ụzọ ahụ. Anyị chọrọ ịkwado ma chọta ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị iji rụọ ọrụ, wee nwee onye nwere nghọta zuru ezu iji dọpụta ha n'ọnụ ụzọ.
Maka ndị gị na ndị otu ahịa, ihe omuma a sitere na Healthy Business Builder na-enye Wzọ iri iji melite arụmọrụ gị.
Adịghị ike ire ahịa nke ọma nwere ike iduhie gị na azụmaahịa gị ma bute oke nsonazụ ma ọ bụrụ na edoghị ya ozugbo. Na infographic a, anyị ga-atụle ụzọ dị iche iche otu ị ga - esi meziwanye arụmọrụ nke ndị otu ahịa gị ka azụmaahịa gị wee nwee ike ịga n’ihu na - aga n’ihu ma na - eme nke ọma taa na afọ ndị na - abịa.
Wzọ iri iji melite arụmọrụ gị
Nye ihe siri ike ọzụzụ na ntinye.
akpali gị ahịa otu.
Mara isi ihe ike onye otu ọ bụla.
Jide ndị na-ere gị aza ajụjụ.
Nye otu ndi otu ahia gi data.
Na-eduzi mgbe niile Otu-na-otu nzukọ.
Nwee nlele zuru oke nke ndị ahịa gị.
Emefula-engineer gị usoro ire ere.
Mee ihe ndu nurturing na ndu akara.
Gbaa mbọ hụ na ahịa, ọrụ ndị ahịa, na ịzụ ahịa dị kwekọrịtara na integrated.
Tags: ike na-ewu azụmahịaotúmelite ahịaNkwado ire ahịaahịa infographicarụmọrụ ahịausoro ire ereọzụzụ ahịan'ire